नेपाली चलचित्र चरम घाटामा गुम्यो ४३ करोड रूपैयाँ – Rajdhani Daily
नेपाली चलचित्र चरम घाटामा गुम्यो ४३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौं । गएको वर्ष नेपाली चलचित्र उद्योग पूर्ण घाटामा रहेको छ । करिब ८६ ओटा फिल्म व्यवसायिक रूपमा असफल हुँदा यी फिल्मबाट चलचित्र क्षेत्रको प्रति सिनेमाको सरदर आधा लगानी अर्थात् ५० लाखका दरले घाटा हुँदा करिब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गुमेको छ ।
तसर्थ, २०७५ साल नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि व्यावसायिक हिसाबले त्यति फलदायी हुन सकेन । यसरी २०७५ मा निर्मित बहुसंख्यक नेपाली चलचित्र व्यावसायिक रूपमा असफल भए । परिणाम स्वरूप, पछिल्लो समय चलचित्र निर्माणमा निर्माताहरू गम्भीर भएका छन् । सोही कारण २०७६ सालमा विषयगत र निर्माण दुवै हिसाबले राम्रा नेपाली सिनेमा आउने आशा गरिएको छ । यो वर्ष चलचित्र उद्योगमा समृद्धि छाउने आशा गरौं ।
२०७५ को बिदाइसँग २०७५ सालमा निर्माणसँगै प्रदर्शनमा आएका नेपाली चलचित्रको व्यापारलाई यहाँ मूल्यांकनको कोशिस गरिएको छ । विदेशीबाट नेपालीमा स्वरांकन गरिएका तीन फिल्मलाई गणना नगर्दा यो वर्ष ९८ वटा नेपाली चलचित्र सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आएको छ । गत ७ वैशाखमा रिलिज भएको ‘स्वर्ग मेरो गाउँ’देखि तीन दिनअघि रिलिज भएका यात्रा ः ए म्युजिक ब्लग र ए मेरो हजुर ३ सम्म आइपुग्दा स्वदेशमा प्रदर्शन भएका नेपाली चलचित्रको संख्या ९८ देखिएको हो । यीमध्ये करिब १० प्रतिशत फिल्मले मात्र व्यावसायिक रूपमा इज्जत जोगाएका छन् । जसमध्ये धेरै कम फिल्मले राम्रो मुनाफा हासिल गरे । बाँकी सबै नेपाली चलचित्र व्यावसायिक रूपमा असफल भएका छन् र सिनेमा क्षेत्रले ४३ करोड घाटा सहनुपरेको छ ।
२०७५ का व्यावसायिक फिल्म
२०७५ मा सर्वाधिक मुनाफा कमाउने फिल्मको सूचीमा छक्का पञ्जा–३ अग्रपंक्तिमा आउँछ । यो फिल्मले नेपालमा मात्र १९ करोडभन्दा माथिको व्यापार गरेको थियो । छक्का पञ्जा–३ सँगै रिलिज भएको अशोक शर्माको फिल्म जय भोलेको व्यापार पनि राम्रो भयो । आफ्नो फिल्मले सात करोडभन्दा माथिको व्यापार गरेको निर्माता निर्देशक शर्माले बताए ।
यस्तै, विकास आचार्यको चलचित्र ‘नाइँ नभन्नू ल’ले साढे ४ करोड हाराहारीको व्यापार गरेर केही मुनाफा कमायो भने साढे ४ करोडकै हाराहारीको व्यापार गरेको भनिएको चलचित्र राम कहानी पनि केही मुनाफामा रह्यो ।
दिनेश राउतको फिल्म प्रसादले पनि ४ करोडकै हाराहारीमा व्यापार गरेको निर्माण पक्षको भनाइ छ । यो फिल्म पनि केही मुनाफामा रह्यो । ४ करोडभन्दा माथिको व्यापार गरेको भनिएको फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनले पनि लगानी सुरक्षित गरेर केही रकम कमाएको दाबी निर्माण पक्षको छ । यस्तै, माधव वाग्ले निर्मित चलचित्र चंगा चेटले पनि नेपालबाट ४ करोडभन्दा केही माथिको व्यापार गरेको निर्माण पक्षको भनाइ छ ।
लक्ष्मण रिजाल निर्देशित आर्यन सिग्देल निर्मित फिल्म कायराको व्यापार पनि राम्रो रह्यो । करिब ३ करोडको व्यापार गरेको भनिएको यो फिल्मले पनि लगानी सुरक्षित गरेको निर्माण पक्षको कथन छ । यस्तै, मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म बोबी सानो बजेटका कारण लगानी सुरक्षित भएको छ । यो फिल्मलाई एकथरीका दर्शकले निकै मन पराए ।
यस्तै दिवाकर भट्टराई निर्देशित चलचित्र क्याप्टेनले पनि करिब ४ करोडको व्यापार गरेर पनि यसले स्वदेशबाट लगानी उठाउन सकेन । विदेश र अन्य बिक्रीले लगानी सुरक्षित हुने निर्माण पक्षको कथन छ । यसरी समग्रमा हेर्दा २०७५ मा रिलिज भएको मध्ये १० वटा फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफलसँगै मुनाफामा पनि रहे ।
दुई साताबाट चलचित्र लभ स्टेसन र यो साताबाट सम्राट शाक्यको यात्रा ए म्युजिक ब्लगसँगै झरना थापाको ए मेरो हजुर–३ प्रदर्शन भइरहेको छ । यी तीनमध्ये चलचित्र लभ स्टेसनले पहिलो सातामा काठमाडौंमा १ करोड ७६ लाख र मोफसलमा १ करोड ४० लाखसहित कुल ३ करोड ७ लाखको व्यापार गरेको र आफ्नो लगानी अब सुरक्षित हुने निर्माता शाहीले बताएका छन् । यस्तै, यात्रा र ए मेरो हजुर–३ को तीन दिनअघि मात्र रिलिज भएका छन् । यी दुवै फिल्मको दुई दिनको व्यापार राम्रो छ । शनिबार र आइतबार ए मेरो हजुरमा दर्शकको भीड अत्यधिक छ । यात्रामा पनि दर्शकको उपस्थिति निकै राम्रो छ । त्यसैले यी दुवै फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल हुने आशा गरौं ।
यसरी, वर्षभरिमा रिलिज भएको ९८ वटा नेपाली चलचित्रमध्ये १० वटाले लगानी सुरक्षित गरेका छन् । यी १० मध्ये पनि चार फिल्मले राम्रो कमाएका छन् । बाँकीले एक दुई लगानी उठाएर केही रकम कमाए पनि बाँकी लगानी जोगाउन सफल रहे । गत साता र यो साता रिलिज भएका तीनवटा चलचित्रको परिणाम अझै आउन बाँकी छ । अरू सबै चलचित्र व्यावसायिक रूपमा पूर्ण असफल भएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा २०७५ साल व्यावसायिक हिसाबले नेपाली चलचित्रको असफल वर्ष साबित भएको छ ।
किन चलेनन् फिल्म ?
२०७५ मा फिल्म नचल्नुका विभिन्न कारण देखिएका छन् । जसमध्ये फितलो स्क्रिप्ट र विषयवस्तु नै पहिलो कारण देखिएको छ । नेपाली स्वादको सिनेमाको अभावले चलचित्र नचलेको फिल्म पण्डित बताउँछन् । नेपाली फिल्म नचल्नुको अर्को कारण बजारको मागभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शनमा आउनु हो । एकै साता तीनदेखि चारवटासम्म नेपाली चलचित्र जुध्नुले पनि बजार बिग्रिएको हलवाला बताउँछन् । अर्को कारण विदेशी सिनेमाको डरलाग्दो अतिक्रमण हो ।
हरेक साता दुईदेखि तीनवटा नेपाली फिल्म रिलिज हुँदा चार वटासम्म हलिउड र बलिउडका फिल्म रिलिज हुने गरेका छन् । हरेक साता सानो बजेटका दुई नेपाली फिल्मले ठूला बजेटका चार विदेशी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सबैभन्दा ठूलो कारण विदेशी सिनेमाको अतिक्रमणले नै नेपाली फिल्म नचलेको चलचित्र निर्माता निर्देशकहरूको ठम्याइ छ ।
यसरी, २०७५ मा नेपाली चलचित्रको बजार बिग्रिएपछि फिल्म निर्माणको क्रम घटेको छ । निर्माताहरू निकै गम्भीर भएका छन् । अब २०७६ सालमा राम्रो र थोरै नेपाली फिल्म निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि २०७६ समृद्धिको वर्ष हुने आशा गरौं ।
व्यापारको हिसाबले वर्षका १० फिल्म
२. जय भोले
७. इन्टु मिन्टु लन्डनमा
२०७५ मा रिलिज फिल्म
स्वर्ग मेरो गाउँ, डमरुको डन्डिबियो, भोर, लम्फू, हिरोज, मनाङे नानी, हैरान, सुनकेशरी, अफिसर, बेबी आइ लभ यु, हरि, अमेरिका ब्वाइज, चंगा, मट्टी माला, बोबी, तिमी हुन्छौ जहाँजहाँ, ए सोल्टिनी, चोखो माया, बाबु कान्छा, वीरांगना, यो पागल मन, कायरा, चक्कर, पण्डित बाजेको लौरी, भैरे, सुकुल गुन्डा, रोमियो एन्ड मुना, चीँ मुसी चीँ, झमकबहादुर, टिनएज, कहीं कतै, पिरिम प¥या छन्, नाइँ नभन्नू ल–५, रामकहानी, जय शम्भो, बह्रमासे, ब्ल्याक, मिस्टर भर्जिन, रेनी, मेरी मामु, रोज, साली कसको भेनाको, छक्का पञ्जा–३, जय भोले, इन्टु मिन्टु लन्डनमा, धुम–३, बाँध मायाले, छिरिङ, अनुराग, कथा काठमाडौं, निर्जला, मालिका, चंगा चेट, दैलो, अनुग्रह, गुनगुन, प्रसाद, कोइला, ड्रिम गर्ल, शान्ति, झिल्के, सुश्री सम्पत्ति, जय श्री दाम, भिलेन, चौका दाउ, गरुड पुराण, आरोप, बैना, सय कडा दश, गोपी, रणवीर, समर लभ, साथी तिमी नै, क्याप्टेन, बुल बुल, जोकर (जादुगर २), फिंगर प्रिन्ट, ब्वाइफ्रेन्ड, रुमालै छ चिनो, द ब्रेकअप, खाग, अदालत, साइँली, द म्यान फ्रम काठमाडौं, पुरानो बुलेट, जानी नजानी, प्रेमलीला, एलान, कागजपत्र, लभ स्टेसन, शुभ लभ, ए मरो हजुर, यात्रा ः ए म्युजिक ब्लग
Tags: गुम्यो ४३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौं। चित्रकार, कवि र रंगकर्मीहरूले जेसुम यात्राको आठौं शृंखलामा चित्रकला र साहित्यकारले साहित्य सिर्जना गरेका छन् ।यो यात्रा मासिक रूपमा आयोजना गरिँदै आएको छ । खोकना बसपार्कबाट सुरु भएको यात्रा ...
सुनामको स्याक्सोफोन धुनमा रमे दर्शक
काठमाडौं। नेपाली गीतसंगीतमा स्याक्सोफोनको धुन प्रस्तुत गर्नुपर्दा गायक गायिकादेखि संगीतकर्मीसम्मले वरिष्ठ स्याक्सोफोन बादक शुभबहादुर सुनामलाई स्टुडियोमा बोलाउँछन् । अघिल्लो पुस्ताका प्रेमध्वज प्रधान,...
प्रधानमन्त्री ओली संसदमा सम्बोधन गर्दै, गुठीसम्बन्धी विधेयक स्थगन गर्ने मनस्थितिमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले केहीबेरमा संसदमा
सरकारी जग्गा सिध्याउनेगरी भ्रष...
वैज्ञानिक भन्छन् : नेपालमा फेरी आठ रेक्टरको भूकम्प… (33,260)
लोकसेवा तत्काल नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनपछि बल्ल विज्ञापन (27,046)
महिला फुटबलकी हस्ती सावित्रा
काठमाडौं। नेपाली गीतसंगीतमा स्याक्सोफोनको धुन प्रस्तुत गर्नुपर्द